(က)-ယာဉ်ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲရာတွင်မည်ကဲ့သို့သတ်မှတ်ပြီးကာလပေါက်ဈေးနှင့်ကွာခြားလျက်ရှိ သည့်မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများကိုပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း | Pyithu Hluttaw
(က)-ယာဉ်ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲရာတွင် အခွန်ရာဖြတ်ဌာနမှ ယာဉ်တန်ဖိုးများကို မည်ကဲ့သို့သတ်မှတ် ပြီးကာလပေါက်ဈေးနှင့် ကွာခြားလျက်ရှိသည့် မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများကိုမော်တော်ယာဉ် ရောင်းဝယ်ရေး အသင်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကာ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကြီးမှ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့် ၂၀၁၉-၂၀ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေတွင် ပြည်သူများ အခွန်ထမ်းသည့် အလေ့အကျင့်ရရှိလာရန် အခွန်များ ကိုရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြည်သူများကလည်း မိမိပိုင်ဆိုင်သည့် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းနှင့်မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းများကို၏ကိုယ်ပိုင်အမည်ပေါက်ပြောင်းရန် ကြိုးစားပြီး လုပ်ဆောင်လာကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ထပ်မံထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ညွှန်ကြားချက်အရ ယာဉ်ပိုင်ရှင်များသည်မိမိ၏မော်တော် ယာဉ်များ အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲသည့်အခါမှသာ ယာဉ်များကို သက်တမ်းတိုးခွင့်ရှိမည်ဟု ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ထုတ်ပြန်သည့်ရည်ရွယ်ချက်သည် လိုင်စင်မဲ့ယာဉ် များကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်၊ ယာဉ်အမှုအခင်းများဖြစ်ပွားရာတွင် ဖြေရှင်းရလွယ်ကူစေရန်နှင့် နိုင်ငံ့အတွက် လည်း လိုအပ်သည့်အခွန်ဘဏ္ဍာငွေများရရှိရန်ဟု မိမိအနေဖြင့် နားလည်ပါကြောင်း။
သို့သော် ရာဖြတ်ဌာနမှ ထုတ်ပြန်လိုက်သည့်မော်တော်ယာဉ်စံဈေးနှုန်းများ ဇယားထွက်လာသည့် အချိန်တွင် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များထံမှ တော်တော်လေး စကားသံကျယ်ကျယ်လောင်လောင်‌များ ကြားရပါကြောင်း၊ ထိုဈေးနှုန်းများထဲမှ အချို့သောဈေးနှုန်းများသည် ပြင်ပကာလပေါက်ဈေး ထက်အင်မတန်မြင့်လျက်ရှိပြီး အချို့သောဈေးနှုန်းများသည် ကာလပေါက်ဈေးထက် လျော့နည်း နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် ယာဉ်များကို အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲသည့် အခါတွင် အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက် အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ဖြင့် အခွန်ရုံးကို သွားရာ တွင် အခွန်ရာဖြတ်ဌာနက သတ်မှတ်ပေးထားသော မော်တော်ယာဉ် ၏စံဈေးနှုန်းသည်တစ်မျိုး ကိုယ့်လက်ထဲတွင်ကိုင်ထားသောမော်တော်ယာဉ်ကို အမှန်တကယ် ဝယ်ယူထားသည့် ဈေးနှုန်း သည်တစ်မျိုးဖြစ်နေပြီး မည်သည့်ဈေးနှုန်းကို အတည်ယူရမည်ဆိုသည့် ပြဿနာသည် မော်တော်ယာဉ် အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲသည့်သူများ၏ အခက်အခဲ တစ်ခုအနေဖြင့်တွေ့ရပါကြောင်း။
ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိမိလေ့လာကြည့်သည့်အခါ အခြားအခြားသောနိုင်ငံများတွင် မော်တော် ယာဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့်အခွန်များကို ကောက်ခံရာတွင် ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ Model၊ အင်ဂျင်ပါဝါနှင့် မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစား ဥပမာအားဖြင့် Sedans၊ Station Wagon၊ SUV အစရှိ သဖြင့် ၎င်းတို့ပေါ်တွင်မူတည်ပြီး အခွန်ကောက်သည်ကို တွေ့ရပါကြောင်း၊ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိမိအရှေ့တွင် တင်ပြခဲ့သည့် အချက်များအပြင် မော်တော်ယာဉ် ဈေးနှုန်း များကိုသတ်မှတ်သည့် စနစ်များကိုလည်း တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ရန်ကုန်လိုင်စင်နှင့်နယ်လိုင်စင်များ၏ မော်တော်ယာဉ် ဈေးနှုန်းကွာခြားမှု၊ မော်တော်ယာဉ်၏ အက္ခရာနံပါတ်ပေါ်မူတည်ပြီး မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်း ကွာခြားမှုနှင့် အင်ဂျင်၏ Mileage များကို ကြည့်ပြီး Mileage များရင် များသလို၊ နည်းရင်နည်းသလို မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းကလည်း ထပ်မံကွာခြားပြန်ပါကြောင်း၊ နောက်တစ်ခုအနေဖြင့် အင်ဂျင် ပါဝါများပါက အချို့အချို့သော မော်တော်ယာဉ်များ ကလွဲ၍ အင်ဂျင်ပါဝါများလေလေ ဈေးနှုန်း ကလျော့လေလေ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့သော အခြားသောနိုင်ငံများနှင့် မတူညီသည့်ဈေးနှုန်း စံသတ်မှတ်မှုများပါလာသောကြောင့် ရာဖြတ်ဌာနမှ စံနှုန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးလိုက်သည့် ဈေးများနှင့် ပြင်ပကာလပေါက်ဈေးများသည် ကွာခြားလျက်ရှိပါကြောင်း။
ပြည်သူများအနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ်အမည်ပေါက်နာမည်ပြောင်းလဲရာတွင် သက်သက်သာသာနှင့် ပြောင်းလဲနိုင်ရန် နှင့် စံစနစ်အနေဖြင့်လည်း သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိအောင် လက်ရှိကာလပေါက်ဈေးနှင့် ကွာခြားလျက်ရှိနေသည့် မော်တော်ယာဉ် စံဈေးနှုန်းများကို လက်ရှိမော်တော်ယာဉ် ရောင်းဝယ်ရေး အသင်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်ရောင်းဝယ်သည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးပြန်၍ သတ်မှတ် ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိသိရှိလိုကြောင်း မေးမြန်းပါသည်။
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်း
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ် များ၏တန်ဖိုးသတ်မှတ်ရာတွင်တစ်နိုင်ငံလုံးတစ်ပြေးညီဖြစ်စေရန်အတွက် ၂၀၀၃-၀၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစ၍ မော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုးစံနှုန်းများကို သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး စီမံချက်ရေးဆွဲကာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် စတင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ မော်တော်ယာဉ် တန်ဖိုးစံနှုန်းသတ်မှတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပထမဦးစွာ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မစမီ သုံးလခန့်ကြိုတင်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များအလိုက် ဈေးကွက် အတွင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အရောင်းအဝယ် ဈေးနှုန်းများကို စုံစမ်းပြုစုပြီးတော့ ပြန်လည်တင်ပြစေပါကြောင်း၊ ထိုသို့ပြန်လည် တင်ပြလာသည့် ဈေးနှုန်းများကို အခြေခံပြီး လက်ရှိကားအရောင်းအဝယ် ဈေးကွက်အတွင်းရှိ အရောင်းအဝယ် ကျွမ်းကျင်သူလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ Myanmar Cars DB တွင် လေ့လာခြင်းများ ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီး စံနှုန်းများကို အကြမ်းဖျဉ်းသတ်မှတ်ပါကြောင်း။
မော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုးစံနှုန်းများကို အတည်မပြုမီ မော်တော်ယာဉ်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အသေးစိတ် ထပ်မံဆွေးနွေး၍ ပြင်ပပေါက်ဈေးနှင့် အနီးစပ်ဆုံးခန့်မှန်းတွက်ချက်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပွင့်လင်း မြင်သာစွာဖြင့်ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊အဆိုပါစံနှုန်းများကိုတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် တွင်းရှိ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနရုံးများကို ဖြန့်ဝေပြီးအများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန် အတွက်လည်း ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန Website တွင်လည်း ကြေညာပေးပါကြောင်း။
လက်ရှိပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ မော်တော်ယာဉ်၊ မော်တော် ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီနှင့်ရေယာဉ်တန်ဖိုးစံနှုန်းများသည် ပြင်ပပေါက်ဈေးနှင့် တတ်နိုင်သမျှနီးစပ်အောင် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားမှုအပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ပြင်ပပေါက်ဈေး နှင့် ကွာခြားမှုများ အနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မော်တော်ယာဉ် တန်ဖိုးစံနှုန်း သတ်မှတ်ရာ တွင်စံနှုန်းနှင့် ပြင်ပပေါက်ဈေးများကွာခြားမှုရှိလာသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အခွန်ဦးစီး ဌာနမှူးရုံးမှတစ်ဆင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများ ကိုတင်ပြစေပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများက မော်တော်ယာဉ်၏ အခြေအနေကို မူတည်ပြီး သင့်လျော်သည့်ဈေးနှုန်းကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်များပေးအပ်ထားပါကြောင်း၊ ယာဉ်၏ အက္ခရာနံပါတ်စဉ်(C၊ D၊ E၊ H၊ I၊ J၊ K၊ L၊ M၊ N) စသည်ဖြင့် အက္ခရာနံပါတ် အနိမ့်အမြင့် ပေါ်တွင် မူတည်၍ ဈေးနှုန်းများကွာခြားပါကြောင်း၊ ယာဉ်လိုင်စင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်လိုင်စင်၊ နယ်လိုင်စင်ရှိသည့်အတွက် ရန်ကုန်လိုင်စင်များသည် နယ်လိုင်စင်ထက် အရောင်းအဝယ် ဈေးနှုန်း ပိုမိုပါကြောင်း၊ မော်တော်ယာဉ် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင် မော်တော်ယာဉ်၏ အရောင် အပေါ် တွင်မူတည်၍လည်း ဈေးနှုန်းကွာခြားမှုရှိပါကြောင်း၊ စံနှုန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့် ဈေးနှုန်းများ သည် ကြမ်းခင်းဈေးသဖွယ်ဖြစ်ပြီး အခွန်ထမ်းမှ စံနှုန်းထက်ပိုမိုသည့် အမှန်တန်ဖိုးကိုတင်ပြလာပါက အမှန်တန်ဖိုးကိုအသုံးပြုဆောင်ရွက်ပါကြောင်း၊ မော်တော်ယာဉ်အခြေအနေအပေါ် မူတည်၍ မော်တော်ယာဉ်၏ Condition အပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းကွာခြား နိုင်ခြင်းလည်း ရှိပါကြောင်း။
မော်တော်ယာဉ်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင် ရောင်းသူနှင့်ဝယ်သူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ရင်းနှီးခင်မင်မှု /သဘောတူညီမှုများနှင့် ဈေးလျှော့ရောင်းခြင်းများလည်းရှိနိုင်ပြီး မော်တော်ယာဉ်များကို တန်ဖိုး သတ်မှတ်ရာတွင် တရားဝင်ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ထားသည့်စံနှုန်းများ နှင့်အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ တွင် မော်တော်ယာဉ်ကို လွှဲပြောင်းပိုင်ဆိုင်သူ၊ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိသူ သို့မဟုတ် အမွေဆက်ဆံခွင့် ရရှိသူသည် သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းနှင့်အညီ မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သူ အမည်ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွက် ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါကြောင်း၊ ပုဒ်မ ၁၃ တွင် မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထားသူသည် နေရပ် လိပ်စာပြောင်းလဲသည့် အခါတိုင်း ပြောင်းလဲသည့်လိပ်စာကို မှတ်တမ်းတင်ရန်ဌာနသို့ အကြောင်း ကြားရမည်ဟူ၍လည်းဖော်ပြထားပါကြောင်း၊ ပုဒ်မ ၅၅(က)တွင် မော်တော်ယာဉ်ပေးကမ်းခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းတို့တွင် မော်တော်ယာဉ်ပေးကမ်းသည့်နေ့ရက် သို့မဟုတ် အရောင်းအဝယ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုသည့်နေရက်မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း မှတ်ပုံတင်သူအမည်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ရေးအတွက် လျှောက်ထားရန်ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃ တွင် လွှဲပြောင်း ပေးသူနှင့် လွှဲပြောင်းလက်ခံသူတို့ နှစ်ဦးစလုံးသည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားနှင့် ယာဉ်မှတ်ပုံတင် စာအုပ်ကိုယူဆောင်ပြီး မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီး ပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းတို့ကို ပြဋ္ဌာန်ထားပါကြောင်း၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်စေရန် ထိန်းကျောင်း ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း။
မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်အမည်ပေါက်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်မတိုင်မီကာလက ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီဌာနက မော်တော်ယာဉ်ရောင်းချသူ၊ ဝယ်ယူသူတို့၏ဓာတ်ပုံပါ စိစစ်ရေး ကတ်၊ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်(မူရင်း)နှင့် မိတ္တူများကိုစိစစ်ပြီး အမည်ပြောင်း ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနနှင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့(ယာဉ်ထိန်းဌာနခွဲ)သို့အမည်ပြောင်းဆောင်ရွက် ထားရှိသူတို့၏ စာရင်းကို ပေးပို့အကြောင်းကြားသည့်စနစ်ဖြင့် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ အထက်ပါအချက်များအပြင် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ဝယ်ယူခွန် အခွန်ပုံစံ(၁) ပါရှိမှသာ အမည်ပြောင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း။
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ်များ (နှစ်ဘီးတပ်ယာဉ်မပါ)သည့် ယာဉ်ပိုင်ဆိုင်သူအမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာမှန်ကန်စေရေးအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ အခွန်သက်သာခွင့်ပြုထားသည့် ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ယာဉ်ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂၊ ၁၃ တို့နှင့်အညီ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၁၂/၂၀၁၉)ကို ထုတ်ပြန်ထားပါကြောင်း၊ ၎င်းညွှန်ကြားချက်အရ ၁. ၁. ၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး မော်တော်ယာဉ်အမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်သူများကိုသာ သက်တမ်းတိုးခြင်း အပါ အဝင် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမည်ပေါက်မဟုတ် ပါက ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှာ ဝယ်ယူခွန်ပေးဆောင်ထားသည့် အခွန်ပုံစံ(၁) ပါရှိမှသာ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်​ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာ များမှတစ်ဆင့် အသိပေးကြေညာလျက်ရှိပါကြောင်း၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန အနေဖြင့် အမည်ပြောင်းဆောင်ရွက်သည့် နေရာတွင် ပြောင်းလဲခ ၅၀၀၀ ကျပ်သာ ကောက်ခံပြီး ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်(ကမ-၃)၊ သက်သေခံလက်မှတ်(အဝိုင်း)၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မူရင်း၊ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်နှင့် ပြည်တွင်း အခွန်ပုံစံ(၁)များ စိစစ်ပြီး ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက ဝယ်ယူခွန်အခွန်ပုံစံ(၁)တွင်ပါရှိသည့် အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာအတိုင်း မှတ်တမ်းတင် ဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိပါကြောင်း။
သို့ဖြစ်ပါ၍ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီနှင့် ရေယာဉ်တန်ဖိုးစံနှုန်းများ သတ်မှတ်သည့်နေရာတွင် မော်တော်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေး အသင်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီး ပိုမိုနီးစပ်မှုရှိပြီး မျှတမှုလည်းရှိနိုင်မည့်စံနှုန်းများကို သတ်မှတ်ပေး ရန်အစီအစဉ်ရှိပါကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။
ဦးဖြိုးဇေယျာသော်(ခ) ဇေယျာသော်(ဇမ္ဗူသီရိမဲဆန္ဒနယ်) မှဆက်စပ်မေးခွန်းမေးမြန်းပါသည်။
ယခုလက်ရှိ မိမိတို့ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲလေးတစ်ခုကိုတင်ပြချင်ပါကြောင်း၊ သတ်မှတ် ထားသည့်စံတန်ဖိုးထက် ကာလပေါက်ဈေးက လျော့နည်း နေပါက မည်သို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ပေးမည်ကို သိရှိလိုကြောင်း မေးမြန်းပါသည်။
အမှန်တန်ဖိုးသည် စံနှုန်းထက်ပိုနေသည့်အခါ ပိုသည့်အမှန်တန်ဖိုးကိုပဲယူပြီး စည်းကြပ်ပါကြောင်း၊ ထို့နောက် အမှန်တန်ဖိုးက စံနှုန်းထက်လျော့နေသည့်ကိစ္စမျိုးများတွင် သက်ဆိုင်ရာ စည်းကြပ်သည့် နယ်မြေ၊ မြို့နယ်မှ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကိုတင်ပြပါကတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးအနေဖြင့် ၎င်းကိုသုံးသပ်ပြီး အမှန်တကယ်လည်း မိမိတို့ စံတန်ဖိုး ထက်လျော့သင့်သည်ဟုထင်ပါက တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးမှ လျော့ပြီး စည်းကြပ်ပေးရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပါကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်သည်ကို ကျေနပ်မှုမရှိပါကလည်း ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနရုံးချုပ်ကို ဆက်၍ တင်ပြနိုင်ပါကြောင်း၊ တင်ပြသည့်အခါ ရုံးချုပ်အနေဖြင့် လိုအပ်သလိုသုံးသပ်ပြီး အမှန်နှင့် နီးစပ် သည့် တန်ဖိုးကို စည်းကြပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။